Amabhonasi ekhasino aseCanada - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Mayelana nebhizinisi lokubheja
Ngokuthuthuka kwakamuva emisha, imboni yokubheja esekwe ku-inthanethi nayo isiqhubekile futhi. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokwethulwa kokusungulwa kwe-HTML5, abadlali okwamanje banethuba lokwazisa izinto ezinhle kuwo womabili amagajethi endawo nomsebenzi womsebenzi.
Ukuthuthuka kwaleli lizwe lokudlala kungabonakala ngempumelelo kumasayithi ahlukene okubheja ahlala enconywa. I-Fantini Gaming Research yenze imibiko ehlukene okuye kwavela ukuthi eCanada, lo mkhakha usuphenduke ama-12% ngaphezulu kwi-2018 kunophenyo lokugcina olwenziwe e-2017 lapho lwalunokuthuthukiswa kwe-4,9%.
Abadlali baseCanada bafike lapho ababheka njengalezi zinhlobo zokuphambukela. Lokhu kuyinto etholakele kuncike ekuhlolweni okuqondiswe ku-2010 ngabakwaCanadiangaming.ca nge-aggregate ye-1742 yababuzwe imibuzo. Kubo bonke abantu ababambe iqhaza kulolu phenyo, i-84% yabo iluvumile lolu hlobo lokukhuthaza. Ukhumbula ukuthi wonke umphakathi obandakanyayo obambe iqhaza kuloluhlolo uhlolwe kanjani ngokwesifiso sobulili, ubudala nendawo, inani labantu abasebenzisa ukubheja njengendlela yokuzijabulisa libaluleke kakhulu.
Ukuthi singobani futhi senzani
Sigcwalisa njengento encane into eyongeziweyo eyengeziwe, sinikeza abadlali baseCanada intuthuko yakamuva evela ekilabhini yokugembula ehamba phambili. Umgomo wethu oyinhloko ukukunika amandla okuthola isinqumo esihle kakhulu maqondana nokukhetha inqubekela phambili. Ngokwenza lokhu, sizokunikeza yonke imininingwane eyisisekelo okufanele uyicabangele. Amabhonasi ekhasino eCanada
Konke ozokuthola ekhasini lethu kubhekane nokuhlolwa okuhlukile namasheke, ukuthola ithuba lokudlala esizindeni esiphephile futhi ukhulise ukuvumelana kwakho kanyekanye. Ngaphezu kwalokho, sibeke imivuzo ngezigaba ezahlukahlukene futhi siyicacisile ngokuphelele ngenhloso yokuthi ungabona ukuthi ungayisebenzisa kanjani nokuthi nini.
Siyaqaphela ukuthi kungaba nzima ukusesha intuthuko enhle kakhulu, ngenxa yendlela ibhizinisi lokubheja elihlala likhula ngayo futhi inani elandayo lamalungiselelo akhangisayo liyakhangiswa. Ngale ndlela, masibe ngumhlahlandlela wethu kulomhlaba futhi sethembe ukuthi sizokunikeza amaphuzu afisayo njengezithiyo lapho ukhetha ukukhushulwa.
Imiphi imivuzo yaseCanada ongayithola
Njengoba sikhombisile ngenhla, sihlunge ukukhuphula ngakunye ngenhloso yokuthi ungezwa noma iyiphi inkinga lapho uskena enye. Kufanele umane ubeke i-psyche yakho kuluhlobo lwamalungiselelo bese uya ekhasini eliye lenzelwe kulo ngokungajwayelekile.
Isibonelo, uma kwenzeka udinga ukuphenya i-No Deposit Bonus udinga nje ukukhetha endaweni yohlobo lweBonus No Deposit Bonus. Kamuva, uzophambukiswa kulelo khasi. Okokuqala, sihlele eminye imibono ebalulekile okufanele uyiqoqe nokuthi ungaqinisekisa kanjani ilungiselelo elinjalo. Ngokwethuba lokuthi ubheke phansi, uzobona ukuthi kukhona ukuthuthuka okuhlukile okurekhodiwe, kusuka ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezindawo zokubheja ezisekelwe kuwebhu zaseCanada.
Ngaphansi, sicacisile ikilasi ngalinye ukuthi uzosebenzisa kusisekelo sethu:
Amakhasino Aphezulu: Le ndawo inikelwe iklabhu engcono kakhulu eku-inthanethi kule mboni. Sirekhode amasayithi wokudlala weklasi lokuqala abeke izinzuzo ezihlukile, okuvelele nabantu abazenzele igama kulo mhlaba. Ngaphezu kwalokho, lapha uzodlula ku-roulette yeklabhu yokugembula nokuthuthuka okuhlukile kwe-Canada, kusuka kuzinhlelo zokuqala zesitolo kuya kwiklabhu yokugembula eku-inthanethi eyamukelayo;
Kuyaphatheka: Kuleli khasi, siqoqe umkhawulo wezindawo zokubheja ezinokusebenziseka okuningana okufinyeleleka noma uhlelo lokusebenza olizinikele. Sizame konke okukodwa okuncike emikhakheni eyehlukene njengokuvuleleka, izinhlelo zokusebenza, okunikezwayo okuthakazelayo nokukhethwa komdlalo. Wonke amanye amalungiselelo esiwakhethile asebenza kalula kunoma iyiphi igajethi eguquguqukayo, kungakhathalekile ngohlaka lokusebenza olusebenzayo;
I-Spins yamahhala: Njengoba igama lingena, kuleli klasi uzothola izindawo ezikuvumela ukuthi udlale imishini yesikhala ngokungenzi lutho oluphuma ephaketheni. Lezi ziza ngobukhulu nobukhulu njengokungena, ingxenye ethile yesigaxa esinconyiwe, ukulayisha kabusha kuyaphenduka noma kubhekiswe kumngane;
Okufunwa Kakhulu: Lesi yisibambiso sesitolo esiyimfihlo esizoshintsha njalo ngenyanga. Kukhethwe kuncike ekuveleni kwayo phakathi kwabadlali baseCanada;
Abafuna Inhlanhla: Kuleli khasi, sihlele uhlelo oluhlukile lwabo bonke abadlali. Sizokunikeza okungathuthukisi okuthe xaxa kwesitolo okuzokusiza ngokungangabazeki ezinhlelweni zakho zemidlalo ezizayo;
Mystery: Inyanga ngayinye sizokunikeza imfihlo online club yaseCanada ekunika okungakaze kubonwe ekujikeni kwehhala. Akujwayelekile futhi ngokuqinisekile kuzokwakha ukulingana kwakho.
Ngokwesisekelo sethu, ngokufanayo uzothola amalebula ahlukahlukene kokuthuthuka okuthile. Lamalebula yilawo malungiselelo esiwabheka njengonqunyelwe, lawo esiwahlongozayo kanye nalawo aqhamuka eklasini elisha lokugembula ku-inthanethi.
Ngaphansi, sibacacisele eminye imininingwane ukuthola ukuqonda okuphezulu.
Ukukhetha: Ukuthuthuka okuhambisana nale thegi kungokunye okunikezwayo okungenakufakazelwa kwenye indawo manje lapha;
Kuphakanyisiwe: Ngokusekelwe ekuqondeni kwethu nangezizathu ukuthi singabaqageli futhi, sikhethe amalungiselelo ambalwa esiwanqumayo. Samukela ukuthi le yinto eqondile ongayidinga;
Amakhasino amasha: Lokhu okunikezwayo okuqhamuka ezindaweni zokudlala eziqhutshwa kulo nyaka nakulowo owedlule. Senze umaki kulezi zigaba ngokungenamibandela inhloso yokuthi ungahle uqonde ukuthi yikuphi ukuthuthuka kwakamuva.
Sihlola kanjani umvuzo weklabhu yokugembula
Njengoba uzwa imivuzo esiyiqophe, uzobona ukuthi lapho sibethula senza ngokwembono engathandeki. Sizocacisa ukuthi yiziphi izinzuzo zokukhetha umvuzo othize kusuka kumasayithi athile wemidlalo njengokukhinyabeza.
I-CasinoBonusCA ayigcwalisi njengendlela yokuqhubekisa izigaba zokubheja, noma kunjalo njengesiqondisi sabadlali baseCanada. Ngale ndlela, sibeka kuwe yonke imininingwane eyisisekelo enenhloso oyinqume ekukhetheni okuhle. Ngaphandle kwalokho, kufanele ubambe iso kwezinye izindawo ezithile njengoba ngokunokwenzeka ngeke zinikeze usizo lwekhasimende, cishe ngeke zigunyazwe yinoma ngubani ochwepheshe ngokulawula imigomo nemibandela noma idatha ejwayelekile mayelana nezinhlelo zesayithi mhlawumbe ngeke iboniswe. Lezi yingxenye yokudla okubi kakhulu okusobala ozokuthola lapho ufuna intuthuko.
Ingabe iklabhu yase-Canada iCanada isemthethweni?
Emhlabeni jikelele, imithetho yokubheja iyaguquka iqala endaweni eyodwa bese iye kolandelayo. Ngokuvumelana nalokhu, iklabhu eminingi eku-inthanethi izovunyelwa ngokusemthethweni ezweni elilodwa futhi ingabi semthethweni noma ingalawulwa kwenye. Kodwa-ke, eCanada, ungahle uqinisekise, ngokubheka ukuthi lolu hlobo lokukhuthaza luvumelekile kwizigaba ezisebenza olwandle.
Kunoma ikuphi, kunokuthile okuhlukile okufanele ukukuqaphele nokuthi okuya ezindaweni ezigunyaziwe. Ngokwesisekelo sethu, uzothola amakilabhu wokugembula akwe-inthanethi asebenza ngaphansi kwemvume:
IMalta Gaming Authority (MGA): yibhodi yokulawula imidlalo eyamiswa ku-2001 ukuphatha izinhlobo eziningi zokubheja eMalta. Kunoma ikuphi, ngenxa yenhlonipho nokuqonda kwabo, beze bezokhipha umthetho oqondisa ukunyakaza kokubheja kuzungeze imbulunga yonke, okufaka ngaphezu kwalokho imakethe yaseCanada. Ngenye yezimpawu eziseshelwe kakhulu iklabhu ye-inthanethi okumele ibe nazo. Uma kwenzeka ukhethe ukukhetha esigabeni esihambisana nokukhonjwa okunjalo, ungaqinisekisa, ngezizathu zokuthi uzodlala esimweni esivikelekile;
IGibraltar Regulatory Authority (GRA): selokhu i-1998 GRA inikeze ngamalayisense okubheja ezindaweni nje zokudlala ezikhombisile ukuncomeka. Kunezigaba ezahlukile zaphesheya ezamukela abadlali abavela eCanada ukuthi beze futhi bazuze ngakho konke uma kunikezwa. Kungumhlangano onamakhono onezimiso ezinzima zokuphila kahle nokuqiniseka kwabadlali;
I-Curacao Gaming Control Board: izindawo ezihambisana nale mvume zinokwethenjelwa ngokungangabazeki futhi ziphephile ukudlala kuzo. Siyaqinisekisa ukuthi ngeke uhlangabezana nanoma yiziphi izingqinamba kumasayithi anjalo;
I-Kahnawake Gaming Commission (KGC): yinhlangano eyamakhono eyikhulu enikeze amalayisense. Ukubuyela emuva njenge-1996 lapho isisethiwe, ayikaze ihlolwe ngaphansi kwemithetho yaseCanada noma enye iwadi.
Ngingakuthola kanjani ukubaluleka kwangempela komvuzo?
Yonke intuthuko inezidingo zayo. Ngenhlanhla, silapha ukukusiza ekuqondeni ukuthi umvuzo unqunywa kanjani nokuthi ungakuthola kanjani ukubaluleka kwayo. Ngokuzenzakalelayo, ukubaluleka komvuzo kunqunywa njengengxenye yesamba semivuzo, isitolo sakho esingaphansi kanye nokulinganiswa kokuvumayo kwamahhala ngethuba lokuthi akusona leso simo. Lokhu kuzophindwa kabili ngomphumela wesidingo sokubheja kanye nezinga lokukhokha.
I-155 mahhala ayikho ibhonasi yediphozi e-huone Casino
I-90 yamahhala e-spin bonus ku-Mrsmith Casino
I-160 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Unibet Casino
I-105 ayikho ibhonasi yekhasino ye-deposit lapha LAPHA Casino
I-35 yamahhala i-spin casino eParis Casino
I-65 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Winzino Casino
I-140 yamahhala e-Kroon Casino
I-75 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Norges Automaten Casino
I-125 mahhala akukho ibhonasi yephophozi ku-BitStarz Casino
I-40 yamahhala e-Box24 Casino
I-25 yamahhala i-casino e-NoBonus Casino
I-90 yamahhala i-spin casino e-Polo Casino
I-150 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-TipTop Casino
I-130 yamahhala i-casino e-Star Casino
I-120 yamahhala i-casino e-Videoslots Casino
I-95 i-spin ibhonasi yamahhala e-Bethard Casino
I-25 yamahhala e-Hopa Casino
I-85 yamahhala i-spin casino ku-Casino
I-165 yamahhala i-casino e-Unibet Casino
I-105 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Slots500 Casino
I-20 yamahhala i-casino ku-Casino engeziwe
I-20 yamahhala e-AllAustralian Casino
I-160 yamahhala e-Winmasters Casino